आइसियुमा छटपटाउँदै ६ महिने शिशु : जसको बाआमाको दर्दनाक हत्या भयो
आइसियुमा छटपटाउँदै ६ महिने शिशु : जसको बाआमाको दर्दनाक हत्या भयो दम्पत्ती हत्याको सिनमा दुई व्यक्ति - डिएसपी पौडेल
नारायण अधिकारी मंगलबार, फागुन २०, २०७६, ११:३३
काठमाडौं- कैलालीका धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालको आइसियु कक्ष। जहाँ गएको पाँच दिनदेखि एक ६ महिने शिशु चोटसँग संघर्षरत छिन्। सिटीस्क्यान रिपोर्टले ती दूधे शिशुको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका देखाएको छ। चोटले मस्तिकमा पनि असर परेको छ। छातिमा निमोनियाको संक्रमण छ। स्वासप्रश्वासमा समेत समस्या छ।
जीवनसँग संघर्षरत ती शिशुको अहिले भने स्वास्थ्य अवस्था धिमा गतिमा सुधारोन्मुख छ।
६ महिने ती शिशुको उपचारमा संलग्न बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन साउद भन्छन्, ‘अस्पतालमा ल्याउँदाकोभन्दा अहिले धरै सुधार हुँदै गएको छ। टाउकाको भित्री भागको चोट कतै ठोक्काएर भएको हुनुपर्छ।’
जीवन र मृत्युसँग यसरी संघर्षरत ती शिशु आखिर को हुन्? आइसियुमा यसरी छटपटाइरहँदा किन उनका बाआमा भेट्न अस्पताल समेत पुगेका छैनन्? हिँडडुल गर्न नसक्ने ती शिशुको टाउको कसले ठोक्कायो र सिटी स्क्यानमा चोट देखियो?
यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न पाँच दिन अघिको घटनामा पुग्नुपर्छ ।
मिति - फागुन १५ गते, बिहीबार
स्थान- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ कलुवापुर।
समय- दिउँसो १२ बजे।
कञ्चनपुरको झलारी बजारबाट पर पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिक टायलको छानो भएका दुई वटा घर। फुस्रो माटोले पोतिएको घरको भित्ता। निलो रंगमा चम्किएका घरका ढोका।
त्यस दिन घरका ढोकामा चम्किएका निला रंग पनि फिक्का देखिन्थे। वरपरका बोटबिरुवाहरु दिएको सुन्दरताको रौनक पनि त्यसदिन फिक्का बन्यो। यसको कारण थियो, माथि उल्लेखित ती शिशुले आफ्नो बाबा आमा गुमाएकी थिइन्।
यी घर र आइसियुमा छट्पटिएकी ती दूधे बालिका ममताको अभिभावक थिए, ५२ वर्षीय जयलाल भण्डारी र उनकी श्रीमती २२ वर्षीया धनादेवी भण्डारी।
धनाको दूधले मात्रै शिशु नअघाउने भएपछि उनले माइतीबाट दूध ल्याएर ममतालाई खुवाउने गरेकी थिइन्। धना हरेक दिन दूध लिन नजिकै रहेको माइती घर पुग्थिन्। तर गत बिहीबार भने उनी दूध लिन गइनन्। धना नआएपछि उनकी फुपुकी छोरी पार्वती रावल धनाको घर पुगिन्।
ढोका खुल्लै थियो। शिशु चिच्याइरहेको थियो। भान्सा कोठामा धना रक्ताम्य भएर ढलेकी थिइन्। अर्को कोठाको खाटमाथि जयलाल उस्तै अवस्थामा थिए। त्यसपछि हल्लाखल्ला फैलियो। शुक्लाफाटा नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष दीलबहादुर बुढासहितको टोली घटनास्थलमा पुग्यो।
‘घटना अचम्म लाग्दो देखियो। हामी सबै छक्क पर्‍यौं। त्यसपछि प्रहरीलाई बोलायौं’ वडाध्यक्ष बुढाले नेपाल लाइभसँग भने।
स्थानीयले १०० मा प्रहरीलाई खबर गरे। नजिकैै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र रावलको टोली सुरुमा घटनास्थल पुग्यो।
‘हामी पुग्दा दुबैको मृत्यु भइसकेको थियो। दुबै जना भिन्दा भिन्दै कोठामा मृत भेटिएका थिए। अझ हत्या राति नै भए जस्तो देखिएको थियो। रगत जमेको थियो। वरपर झिँगा भन्केका थिए। दुबैको घाँटी र टाउकामाम चोट लागेको थियो’, घटनास्थल पुग्दा देखिएको दृश्य प्रहरी निरीक्षक रावलले नेपाल लाइभसँग टेलिफोनमा भने।
रगतको आहालमा लतपतिएका बाबा आमाको मृत्यु भइसकेको थियो। तर उनै बाबा आमाको शव नजिकै ती ६ महिने शिशु ओठमुख सुकाउँदै च्याच्या गर्दै रोइरहेकी थिइन्। त्यसपछि ती शिशुलाई भने उपचारका लागि भन्दै उनकै मावली पक्षका मान्छेले लिएर गएको कञ्चनपुरका डिएसपी तथा प्रवक्ता रवीन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। उनै शिशुको अहिले पनि आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
तीनै सबुद र विभिन्न प्राविधिक र म्यानुअल पाटोबाट घटनाको सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान भइरहको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको लेन्ससमा दुई जना व्यक्ति देखिएको डिएसपी पौडेल बताउँछन्। तर उनीहरु को हुन् भन्नेबारे भने उनले केही खुलाउन चाहेनन्।
हत्याको सिनमा दुई व्यक्ति : डिएसपी पौडेल
बुधबार राति नै हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरे पनि उक्त घरमा कोही नगएकाले बिहीबार दिउँसो मात्रै घटनाबारे जानकारी भएको थियो। घटनाबारे जानकारी आउनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा एसपी मुकुन्द मरासिनी, डिएसपी रवीन्द्र पौडेल लगायतको टोली तालिम प्राप्त कुकुरसहित घटनास्थल पुगेको थियो।
शंकास्पद घटना देखिएपछि प्रहरी विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। शव महाकाली अस्पतालमा पोष्टमार्टका लागि पठाइएको थियो।
घटनास्थलमा भेटिएका कपडा, रगत, त्यहाँ हुनसक्ने फिंगर प्रिन्टलगायतका सबुद प्रहरीले उठाएको थियो।
तीनै सबुद र विभिन्न प्राविधिक र म्यानुअल पाटोबाट घटनाको सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान भइरहको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको लेन्ससमा दुई जना व्यक्ति देखिएको डिएसपी पौडेल बताउँछन्। तर उनीहरु को हुन् भन्नेबारे भने उनले केही खुलाउन चाहेनन्। ‘अहिले नै यही व्यक्ति भन्न सक्ने अवस्था छैन। दुई जना व्यक्ति सिनमा देखिएका छन्’ डिएसपी पौडेलले भने।
जयलालको पहिलो श्रीमतीको क्यान्सर रोगका कारण तीन वर्ष पहिला मृत्यु भएपछि दोस्रो श्रीमतीको रुपमा धनादेवीलाई भित्र्याएका थिए। पहिलो श्रीमतीतर्फका दुई छोरा छन्। आमाको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएपछि बाबुले अर्को श्रीमती ल्याएपछि छोराहरु र जयलाल बीचको सम्बन्ध राम्रो भएन। घरायसी कुरामा विवाद हुँदा बाबु जयलालले जेठा छोरो भरतलाई खुकुरीले समेत हानेका थिए। सो घटनामा उनी २८ दिन प्रहरी हिरासत बसेर छुटेका थिए। त्यसपछि छोराहरु जयलालसँग नबसेर भिन्दै बस्दै आएका थिए। यही रिसिइबीले त भण्डारीको दम्पत्तिको हत्या भएन? प्रहरीले यो प्रश्नको जवाफ पनि खोजिरहेको छ।
त्यस्तै जयलालले विवाह गरेकी धनादेवी भर्खर २२ वर्षकी मात्रै थिइन्। धनादेवीले आफ्नो प्रेमी हुँदा हुँदै जयलालसँग विवाह गरेको चर्चा पनि गाउँमा चल्ने गरेको थियो। यस विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अहिलेसम्म स्थानीय प्रहरीले नै घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर घटना भएको कसरी हो यकिन छैन।
ग्राण्डी अस्पतालले उत्कृष्ट भनेर पुरस्कृत गरेका डाक्टर नै ‘नक्कली’
फेवातालको सीमांकन धमाधम, कर्ण शाक्यको मुद्दा भने सरेको सर्‍यै २०७५ वैशाख १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवाताल क्षेत्रमा अवैध रुपमा निर्माण भएका सबै संरच... बिहीबार, फागुन २०, २०७७
सात दिनमा तोलामै २७ सयले घट्यो सुन शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
काठमाडौं आइपुगे विप्लव, सिधै बालुवाटार जाने शुक्रबार, फागुन २१, २०७७